Mutungamiri wekutengesa ndeye URL yakasiyana iyo vanhu vanyoresa zvakananga kana kuburikidza nemabhukukiti avo. Google Analytics uye mamwe maitiro ewebhu web analytics anobva pane mutauro weHTTP wemusoro unozivikanwa sekutumira iyo inotungamirira vashandisi kumapeji ewebhu akakodzera. Kana muwandu wemotokari yakananga yakakwirira pane yakatarisirwa, mikana ndeyokuti spammers vakarova Google Analytics account. Asi kana iyo nzira yakananga inoratidza kusvika gumi kubva muzana ye data yako, iyo ndiyo yakarongeka, uye haufaniri kunetseka pamusoro payo - steppstoffe meterware. Artem Abgarian, iyo Semalt Mutungamiri Mukuru weMutengi weVatengi, anotenda kuti imwe yenzira dzakanakisisa dzekudzikisa nhema dzisiri dzekutengesa kuisa mishandirapamwe dzako uye kutarisa nhamba yevashanyi pawebsite yako. Nekuita izvi, mhanje yekufambisa uye kushanyira zvakananga kuchave kunonzi kune nzvimbo yakarurama, pasinei nokuti magwara acho abvepi.
Chii chinonzi Direct Traffic?
Kana mumwe munhu akafanisa zita rekugara panzvimbo yake uye akashandisa bhukimeni kuti awane nzvimbo yako, ipapo iwe uchawana migwagwa chaiyo. Zvakakosha kuyeuka kuti zvikamu zvakananga zvinogona kuitika chero nguva uye iyo Google Analytics account ichaongorora kana kufamba kwakananga kwakarurama kana kwete. Zvimwe zviitiko zvinosanganisira:
Kushandura maiyo email pakuteerera nemupi webasa
Kushandura kubatana kweMicrosoft Office kana faira yako PDF
Kuwanika pawebsite kubva kune URL shoma
Kushandura kubatana kubva kumashure ekufambiswa kwemafambisirwo evanhu akadai se Twitter uye Facebook. Yakawanda yepurogiramu dzefoni hazvipfuuri ruzivo rwekutumira..
Kuongorora nzvimbo dzisina kuchengeteka (HTTP) nekuenzanisa navo nenzvimbo dzakachengeteka (https). Mumamiriro ezvinhu akadaro, nzvimbo yako yakachengeteka haifaniri kupfuurira kunyorera kune imwe nzvimbo isina kuchengeteka.
Kutungamira motokari kune simba rekukomberedza mhando dzakasiyana, uye kushanyira nguva dzose kunowanikwa mubhuku reGoogle Analytics.
Kana iwe uchinzwa kuti motokari yako nzvimbo inogamuchirwa haisi kusvika kune chiratidzo, imwe yenzira dzokugadzirisa nayo kuwedzera mitemo yekutsvaga kana ma tag URL mune mamwe mapurogiramu. Somuenzaniso, unogona kudzivirira nyore nyore kufamba kwekutsvaga kutengesa kupfurikidza nekuwedzera mitemo yakatarisa iyo inovimbisa kuti masangano ose kubva pamushandirapamwe anoratidza se email pane nhoroondo yeGoogle Analytics.
Kutsanangura Mutemo Wakatarisana Nevatengi Vako
Paunoona kuti motokari yakananga iri kuwedzera, unofanira kuzvitsanangurira kune vatengi vako vane mienzaniso yakanaka. Iva akajeka uye akajeka pamusoro pekuti iyo data kubva kune chero ipi zvayo inogona kuguma mumabhakete zvakananga. Iwe unofanirwa kutsanangura zvakajeka mamiriro ezvinhu akasiyana angaita kuti Direct, zvakadai sekumaimeri, tsvakurudzo s kana backlinks ne https websites. Mikana ndeyokuti ruzivo urwu ruchaita kuti mutengi wako arege kufara, asi haufaniri kubiridzira kune mumwe munhu uye unofanirwa kubhadhara kugamuchira manyogisi aripo kubva kuGoogle, Bing, uye Yahoo.
Ichokwadi kuti motokari yakarurama ndiyo kutukwa kwevanodzidza vashandi. Asi iwe unogona kutora matanho akakodzera ekugadzirisa dambudziko iri uye unogona kugutsa vatengi vako nenzira iri nani. Iva nechokwadi chokuti iwe unogara uchitsvaga gwaro rako reGoogle Analytics uye ramba uchiona nezvenzira dzemugwagwa.